Tirakoobkii 2009 ee Hayadda Brå - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Tirakoobkii 2009 ee Hayadda Brå
Publicerat fredag 15 april 2011 kl 15.16
* Hatbrott waxa afka iswiidhishka lagu yiraahdo waa kolka uu ruux dembi u galo iyada oo ay ugu wacan tahay jinsiga ruuxa ama qoowmiyadda uu ka soo jeedo, midabkiisa, diinta uu aaminsan yahay, nooca cidda uu u galmoodo, ama cidda uu isku tirinayo nin iyo naag.
* Xeerka lagu adkeeyay dembiyada noocaasiya ayaa buugga xeerka lagu daabacay sannadkii 1994.
* Qaar badan ee ka mid ah dembiyada noocaasiya ayaanan gaarin hayadaha ammaanka, sida ku cad baaritaan ay sameeysay hayadda ka hor-tagga dembiyada ee BRÅ. Haydaha poliiska ee ku kala baahsan dalka ayaa mid walba si u gooniya u wajahaa dembiyada naceeybka/faqooqa sidaa daraadeedna adag tahay in la isku bar bar-dhigo hoowlaha poliisku middaa ka geeysto. In ka yar bar 5 800 ee ay hayadda BRÅ ku caddeeysay iney ahaayeen dembiyo neceeyb faqooqid ey ka dambeeyeen sannadkii 2009 ayuu poliisku u aqoonsaday falal-dembiyeedyo kuwaa la xiriira.
* Badankood dadyowga lagu soo ogay dembiyada noocaniya ayaan horay uga diiwaan-gashaneyn liiska poliiska (60% sida ku cad tirakoobkii BRÅ ee 2009). In ka yar tobankiiba hal ayaa gacanta lagu soo dhigaa ciddii geeysatay.
Isha: War-bixintii Brå ee sannadkii 2009.